Semi-otomatiki yekudira muchina inokodzera basa mune semi-otomatiki maitiro, inotungamirwa neanoshanda ne joystick. inosanganisira fan-yakaita kudira ladle, servo tilting mashandiro, longitudinal mota njanji system, kuendesa system, kutonga uye mashandiro system, yakachengeteka system, tambo yedhijitari, rwizi inoculation mudziyo, nezvimwe. Nerusununguko nhatu rwekufamba kwenguva, kutenderera kufamba uye kuteedzera kudira, zvinowanzoshandiswa mumarudzi ese ekuumba mutsara we grey iron, ductile iron, yaisanganisira bhodhoro rekuumba uye hapana-bhodhoro rekuumba mutsara.
Ndiro yesimbi inogadzira simbi, inowanikwa munzvimbo yakavhurika yevira, choto kana simbi yakanyungudutswa, kukanda mashandiro usati waita..Izvi zvinhu zvikuru ndezvekuti: Rotary centre dhizaini inonzwisisika, iyo nzira mbiri-inodzoserwa mushe, yakakosha kuti itangezve. hutachiwana mhando rotary inotora maviri-nzira turbine vice hutachiwana, inotsvedza kufambisa, inokodzera mashandiro, maviri-nzira yakanaka kusagadzikana.Straight kubva kukiya giya kufambisa shaft inotora yakakwira mhando, zvakapetwa nhanho dzekutonga kukweshera, kuzvivharira kuita kwakasimba, kureruka zvakasununguka, inogona kukandwa nechisimba zvekunze zvishoma, dzoka nekukasira, usakombama, kushandiswa kwechengeteka uye kwakavimbika.
Punch Out Muchina, Semi-Automatic richigadzirisa Machine, Chinwiwa Mould Machine, Sandbox, Chinwiwa richigadzirisa, Richigadzirisa vachikanda chinu,